Goethe Zertifikat C1 - SMP
Faylkan waxaa diyaariyey Goolka Goethe.Bariiqa zippy waxaa ka mid ah buugag badan oo loogu talagalay qaabka pdf iyo fayl maqal ah oo dhageysiga.
Imtixaanka dhexe ee bartamaha
Goethe Zertifikat C1 (ZMP) jir 08 / xnumx'y ayaa ka zmp hadda 'ilaa, weli heer aad u wanaagsan cadeyneysaa in aad tahay adag afka caadiga ah German waa xoogaa ka badan in. Waxaad gaartay heerkan ka dib celceliska 2007 ilaa 800. Aqoonta luqadani waxay kuu ogolaaneysaa inaad naftaada u sharaxdo siyaabo kala duwan, labadaba iyo qoraal, iyo fahamka qoraalada adag.
Goethe Zertifikat C1 (ZMP) waa mid aad u fiican u yaqaan oo ballaaran adduunka oo aqbalay inay cadeyn u af Jarmal bixisaa aqoon guud loo shaqeeyayaasha badan. Wixii warbixin ZMP ku guul ah kusoo gabagabeeyay, diyaariyo fasalka ee kulliyadda ( "Studienkolleg") oo lagu hayo dugsiyada xirfadda qaar ka mid ah oo ka reeban imtixaanka gelitaanka afka jaamacadaha. Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo aad ka heli kartid kulliyaddaada ama jaamacada aad dooratay.
Si aad u furto oo u akhrido feylalado dheerad ah pdf, Adobe Acrobat Reader waa in lagu rakibay kombiyuutarkaaga Si aad u soo dejiso Adobe Acrobat Reader, waxaad booqan kartaa:
Riix halkan si aad u soo dejiso barnaamijka